SarcoidosisUK အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာစဉ်းစားသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အသင်းဝင်ကျွန်တော်တို့ကို sarcoidosis ကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်အပြုသဘောနှင့်ကြာရှည်ခံကတိကဝတ်ပြသထားတယ်။
အဘယ်ကြောင့်ငါတစ် SarcoidosisUK အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာသင့်သလဲ
SarcoidosisUK sarcoidosis များအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းရှာဖွေတာကတိပြုပါတယ်။ ထို့နောက်အချိန်အထိကျနော်တို့အခြေအနေကိုနှင့်အတူနေထိုင်နေပြည်သူများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်မိတ်ဆွေများမှထောက်ခံမှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရည်ရွယ်ပါသည်။
SarcoidosisUK အဖွဲ့ဝင်များပွားပြန်ကြားရေး, ထောက်ပံ့ရေးနှင့်သုတေသနအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းရန်ပုံငွေအဖြစ်အဖွဲ့ဝင် '' အစည်းအဝေးများမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာကို၏ပြေးအပေါ်တစ်ဦးဟုပြောဆိုကြရန်ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်းကူညီပေးပါမည်။
နှစ်ပတ်လည်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ရုံ£ 32 ဖြစ်ပါတယ်။ £ 12 တစ်ချွေတာရေး - သင်တို့သည်လည်းနှစ်စဉ်£ 20 ကုန်ကျ, အစိမ်းရောင်အဖွဲ့ဝင်များအတွက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ အစိမ်းရောင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အတူကျနော်တို့အစားစက္ကူနဲ့ post များ၏အီးမေးလ်ကနေတဆင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏စာပေးစာယူနဲ့သတင်းလွှာပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
ငါဘယ်လို sign up ကိုနဲ့ပေးဆောင်သလဲ?
sign up ကိုနှင့်သင့်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဆပ်ဖို့အောက်ပါ options နှစ်ခုကနေရှေးခယျြကျေးဇူးပြုပြီး:
Option ကို 1: အွန်လိုင်းငွေပေးချေ
ဒီ option သင်တို့သည်ငါတို့၏ SarcoidosisUK ဆိုင်ရန်သင့်အားပြန်ညွှန်းနေဖြင့်အွန်လိုင်းဆပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အသင်းဝင်ကိုအောက်တွင်ပေးထားသောလင့်ခ်ကို အသုံးပြု. ထုတ်ကုန်အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့်အလိုတခုတည်းအဖြစ်လှည်းထည့်ပါ။ တစ်ဦးအပိုဆောင်းလှူဒါန်းမှုအတွက်စစ်ဆေးမှုများထွက်အဆင့်တွင်စဉ်အတွင်း SarcoidosisUK ကိုထောကျပံ့ဖို့ကဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်။
Option ကို 2: တစ်အသင်းဝင် Form ကိုဖြည့်
download, ပုံနှိပ်နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော button ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် SarcoidosisUK အသင်းဝင် Form ကိုပြန်လာပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် scan နဲ့အီးမေးလ်ပို့ပုံစံဒါမှမဟုတ်ပို့စ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပုံစံပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်နှင့်စာတိုက်လိပ်စာများကိုပေါ်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ စာမျက်နှာ။
SarcoidosisUK ထောက်ပံ့ဘို့ Thank you! ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်သငျသညျမပါဘဲဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
sarcoidosis သို့ SarcoidosisUK ရန်ပုံငွေများကမ္ဘာ့ဦးဆောင်သုတေသနပြု။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်အခြေအနေကိုများအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်။